Ahoana no fanalana ny lalitra any ivelany!
Fotoana fandefasana: 08-12-2020
fantaro hoe aiza no misy ny lalitra sy ny fiompiana - ary ahoana no fomba hidirany ao an-trano. Raha vantany vao fantatra izany, ny fanadiovana, fanilihana ary fanaraha-maso mekanika na simika dia hanampy azy ireo tsy hivoaka. Fanaraha-maso ny sidina an-trano Mba hahitana hoe aiza no misy ny lalitra sy ny fiompiana ...Hamaky bebe kokoa »
Ataovy ao ivelan'ny tranonao ny totozy an-trano
Ny totozy sasany dia afaka manao biby mahafinaritra sy mahafinaritra, fa ny totozy an-trano dia tsy iray amin'ireo. Ary rehefa mitsofoka ao an-tranonao ny mpikiky iray amin'ny alàlan'ny triatra na banga na moka amin'ny drywall, boaty voatahiry ary taratasy, na koa tariby hanaovana ny akaniny - na dia mivoaka sy mivoaka ny taimbolo aza rehefa mandeha izy,Hamaky bebe kokoa »
Aiza no tokony hametrahako ny fandriky ny raty sy ny fanontaniana sy valiny rat 11 hafa
Ahoana no idiran'ny voalavo ao an-trano? Ahoana no ahalalanao fa manana voalavo ianao? Fa maninona no voalavo no olana? Ny voalavo Norvezy sy ny voalavo an-tampon-trano dia ny voalavo roa mahazatra indrindra manafika trano ary mety hanimba tokoa. Ireto misy fanontaniana napetraka matetika momba ireo rodent pes ...Hamaky bebe kokoa »
Ny tsy fitovian'ny voalavo sy ny totozy
Ankoatry ny fisehoan'ny voalavo sy ny totozy dia hafa kely noho izany izy ireo. Zava-dehibe ny fahalalana ireo fahasamihafana ireo satria ny ezaka fanaraha-maso ny biby mpikiky anao dia hahomby indrindra rehefa takatrao ny tsirairay amin'ireo bibikely, ny fitondran-tenany, ny sakafo ...Hamaky bebe kokoa »
Famantarana mahazatra 7 izay mbola anananao totozy na voalavo ao an-tranonao
Nanana olana tamin'ny totozy na voalavo ianao tao an-tranonao, saingy mieritreritra ianao fa ianao - na ilay matihanina amin'ny fitantanana peste nantsoinao - dia nanary ny biby mpikiky rehetra. Fa ahoana no ahafantaranao tsara? Efa antitra na vaovao ve ireo taolam-paty hitanao tao ambanin'ireo kabinetra ireo? Mahatsiaro anao ve izany jus ...Hamaky bebe kokoa »
Tongasoa ny fitsidihana avy amin'ny Pelsis Group
Mpitantana vokatra telo matihanina dia manome lesona tsara momba ny fanatsarana ny vokatra. Mandritra izany fotoana izany dia mitondra famolavolana vokatra vaovao ho an'ny famokarana izy ireo.Hiezaka mafy araka izay tratra izahay hanolotra ireo vokatra mahafaly atsy ho atsy! Hamaky bebe kokoa »
Ny foto-kevitra momba ny serivisy
Cangzhou Jinglong Technology Co., Ltd. dia miorina ao Cangzhou Tianlida Metal Products Co., Ltd., dia orinasa fanta-daza manokana momba ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana, ny varotra ary ny fanompoana fitaovana fanaraha-maso biolojika manimba. Miorina amin'ny fampiasam-bola 20 millio ...Hamaky bebe kokoa »